Ny rindranasa tsara indrindra hamoronana sary mihetsika ho an'ny Android sy iPhone 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Apps hamoronana -tsary Mihabetsaka ny fangatahana ataon'izy ireo noho ny fahafahan'ny tsirairay mahatsapa ho toy ny matihanina manova ny sariny misy fiatraikany manokana ary mizara azy ireo amin'ny "beso".
Ny fiasa isan-karazany dia mety hisy fiantraikany amin'ny safidin'ny fampiharana hampiasaina, toy ny:
la karazana vokatraNy fampiharana rehetra mendrika ny sira dia tokony hanolotra kalitao tsara, na dia mazava aza fa tsy tokony hieritreritra isika fa ny vokatra iray, na dia mahagaga aza, dia mety ho ampy hamoronana sary mihetsika adala;
la fahatsorana fampiasana: ny baiko sy ny baraovana dia tsy maintsy ho intuitive hanamorana ny asa ho an'ny mpampiasa;
la mora ny mizara: ny fizarana safidy dia tokony ho tratran'ny .... kitiho !!
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiezaka izahay hanome torolàlana mahasoa ho an'ireo rehetra te-hanandrana ny vintan'izy ireo amin'ny fampiharana sary mihetsika amin'ny famaritana ny fiasa sy ny lafy tsarany ary ny lafy ratsy. Mba hanamorana ny raharaha dia hizara ny lahatsoratra isika fizarana telo, iray natokana manokana ho an'ny mpampiasa Android, iray natokana manokana ho an'ny mpampiasa iPhone ary iray natokana ho an'ny fampiharana fampisehoana slide efa misy ao na dikan
VAKIO IHANY: Fampiharana 30 hanamboarana horonantsary sy hanovana horonantsary (Android sy iPhone)
Ny fampiharana sary mihetsika tsara indrindra ho an'ny Android
a) Sary FX Live Wallpaper:
Tsy misy isalasalana fa izy no fampiharana malaza indrindra amin'ny indostria manana alaina 13 tapitrisa mahery.
Ny rindranasa dia manolotra fampiasa maro, ahafahanao mampakatra sary, mamorona sary mihetsika, manampy sary mihetsika, mametraka loko, vokany ary maro hafa. Sary FX Live Wallpaper Izy io dia manana mpamoaka sary tena tsara, azo ovaina ary mamela anao hamorona sary avo lenta. Ho fanampin'izany, dia tena intuitive ary noho izany dia mora ampiasaina na dia ho an'ireo tsy dia za-draharaha aza.
Ny fatiantoka dia misy ny tsy fahaizana mandefa ny fakantsary miaraka amina fampiharana mihazakazaka, ny fironana hianjera rehefa be loatra ny lahatahiry misokatra, ary ny tsy fisian'ny fihodinan'ny sary mandeha ho azy.
faharoa) Ny sary mihetsika sy ny mpanamboatra sary:
Ity rindranasa ity dia manolotra traikefa famoronana sary an-tsary tena optimal indrindra noho ny fitambaran'ny interface interface intuitive sy fitaovana mandroso.
Sary mihetsika sary manome be dia be ny effets, sivana ary frame, miaraka amin'ny fitantanana votoaty mety hanamora ny famoronana sary mihetsika kalitao amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo rakitsary ao amin'ny galeriana amin'ny lahatahiry samihafa. Mandritra izany fotoana izany dia sarotra ny mizara ireo horonan-tsary voatahiry; koa, ny kalitaon'ny sary miova arakaraka ny ambaratonga voafantina.
C)PIXGRAM - Sary momba ny sary amin'ny mozika:
Ity fampiharana mpamorona sary mihetsika ity dia manamora ny fampidiran'ny tsirairay sary, ny fisafidianana ny mozika ankafizin'izy ireo, ny fampidirana ny sivana sy ny vokany, ny famoronana sary mihetsika azy manokana ary hizarany an'izao tontolo izao ary azo antoka fa ny fampiharana tsara indrindra ho an'ny vao manomboka.
Pixgram mamela anao hitahiry seho an-tsokosoko amin'ny endrika samihafa, manana sivana faran'izay tsara ary mila fampiasana mozika manokana. Mety tsy ilay fampiharana matihanina indrindra eny an-tsena izy io, fa io no mandaitra.
Mpanamboatra Tsy mankafy ny lazan'ireo rindranasa natolotra tamin'ny teboka teo aloha izy io, saingy manome fahafaha-manao tena mahatalanjona ho an'ireo vao manomboka mamorona sary mihetsika: noho ny fifandraisana azo antoka fa mora dia mora tokoa ny mampakatra sary, mikaroka azy ireo, mandrindra ny playback kisendrasendra ary maro hafa. Misy koa ny widget ho fanavaozana ny sary mandeha ho azy, izay ahafahanao manampy vaovao.
Etsy ankilany, ny fahazoana ny fampisehoana widescreen dia mirona ary tsy manana ireo fiasa ampiasain'ny fampiharana amin'ny sokajy mitovy.
Andro androany dia rindranasa natao ho an'ny tonian-dahatsoratry ny manam-pahaizana ary manome fonosana manankarena endrika ho an'ny mpampiasa, miaraka amin'ny menio namboarina sy fomba fampiasa mifanerasera. Azo ampiasaina an-tserasera ny rindranasa ary azo atao ny mamorona seho an-tsarimihetsika kalitao, amin'ny fampiasana asa maro samihafa mba hanomezana fikitika tokana ireo fampisehoana slide-nao.
Mampalahelo fa ny Dayframe dia mirona amin'ny famafana ny baterian'ny fitaovana ampiasaina ao anatin'ny fotoana fohy ary mety ho sarotra ho an'ireo vao manomboka.
Ny fampiharana sary mihetsika tsara indrindra ho an'ny iPhone
PicPlayPost dia rindrambaiko mailaka mamela anao hametraka mora foana sary, horonan-tsary, mozika ary GIF, ka mahatonga azy io ho iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra amin'ny karazany. Azon'ny rehetra jerena ny rindranasa ary manolotra fiasa mahomby hanatevenana horonan-tsary sy sary mora foana.
PicPlayPost Izy io dia manana interface tsy manam-paharoa izay mamela anao hampiditra sary 9, GIF na horonan-tsary isaky ny tetikasa ary ataovy mahasarika kokoa izy ireo miaraka amina safidy tsara misy vahaolana avo lenta.
Ny mozika voafetra voafetra ho an'ny Fijerena an-tsary sy ny fampiharana mari-drano amin'ny sary mihetsika, na dia azo ampifanarahana aza, dia tsy dia mahafinaritra.
SlideLab mamela anao hanova ny sary ho lasa video ao anatin'ny minitra vitsy monja amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo mozika tafiditra ao anaty na rindrambaiko. Ireo sary mihetsika namboarina dia azo tehirizina amin'ny fitaovana finday, hitazonana ny habeny tany am-boalohany, na zaraina amin'ny mombamomba azy ireo efa nifanaraka tamin'ny vahaolana notakin'ny tambajotra sosialy izay tian'izy ireo hizarana. Ilay rindranasa koa dia manolotra sivana maro karazana hampiharina amin'ny sarinao.
Ny lesoka ihany SlideLab dia tsy mamela hampiasa mozika avy amin'ny iTunes hizara Facebook O Instagram. Mbola fampiharana miavaka io.
C) Tale fampisehoana sary:
Talen'ny fampisehoana mamela nyiPhone / iPad ho lasa sehatra ho an'ny sary mihetsika, amin'ny fampiasana ny sary voatahiry ao amin'ilay fitaovana. Mampientam-po ny isan'ny vokatra atolotra, indrindra raha jerena fa mamela anao hitahiry sary mihetsika ny fampiharana HD na eo amin'ny efijery feno aza. Ho fanampin'izay, mamela anao hizara fampisehoana amin'ny tambajotra sosialy tsy misy fahasarotana ilay fampiharana.
Talen'ny fampisehoana Izy io dia manana mpamoaka sary tsotra sy tsotra ary mamela anao hamorona horonan-tsary koa izy io.
Ny mifanohitra amin'izany, ny hafainganam-pandehan'ilay fanodinana dia azo ihodinan'ny fahatsiarovana nyiPhone. Na eo aza izany dia mbola azo iadian-kevitra fa ny mpanao sary an-tsary tsara indrindra no misy iOS.
Picflow Tsy manana ny fiasa rehetra atolotry ny rindranasa hafa izy io, fa fampiharana mora entina sy fehezina rehefa manao sary mihetsika. Ity fampiharana ity dia ahafahanao mametraka ny fotoana filalaovana isaky ny sary nakarina ary avy eo mandamina azy io hikorisa miaraka amin'ny mozika fototra nofidinao izay azo alaina ao amin'nyiPod.
PicFlowTao anatin'ny minitra vitsy monja dia ahafahanao mamorona fampisehoana mavitrika sy mihetsiketsika hizara ao amin'ny Facebook na Instagram, mamaky ireo sary miaraka amin'ny asan'ny slide sy pinch ary mampihatra ny iray amin'ireo 18 tetezamita misy.
Mampalahelo fa voafetra ihany ilay kinova maimaim-poana ary tsy lasa lavitra intsony ny fandefasana sary 30 FPS.
iMovie manolotra endri-javatra marobe sy kalitao avo lenta, manao azy ho iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra amin'ny famoronana sary mihetsika iPhone. Ny fampiharana dia ahafahanao manova ny audio isaky ny clip noforoninao ary manolotra lohahevitra, tetezamita, vokam-peo ary lohateny. Noho ireo antony ireo dia maro ireo mpampiasa no tsy miraharaha ireo fampiharana hafa ary mampiasa iMovie amin'ny filàna rehetra mifandraika amin'ny fanitsiana video na famoronana sary mihetsika.
Ny antony nanamboarana ity app ity iPhone Izy io dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny famoronana sary mihetsika. Etsy ankilany, ny fampiharana dia tsy dia marefo ary somary sarotra ny miatrika ny vao manomboka.
VAKIO IHANY: Mamorona horonan-tsary, mozika, vokany toy ny sary mihetsika avy amin'ny PC
Fampisehoana sary mihetsika tsara indrindra ho an'ny Android sy iPhone
Azo ampiasaina amin'ny fitaovana roa Android izany iPhone , VivaVideo manana kinova fototra azonao ampiasaina sy alefa maimaim-poana. Mandritra ny fanitsiana ny sarinao dia afaka misafidy iray ianao "maody pro" ho an'ny malefaka kokoa ary "maody haingam-pandeha" ho an'ny kinova haingana sy haingana kokoa. Ny fakantsary amin'ny fampiharana dia ahafahanao mirakitra horonantsary rehefa mampihatra effets manokana 60 mahery. Avy eo ianao dia afaka manampy ny tetezamita, ny vokam-peo ary koa ny mandika ilay horonantsary natao.
Rehefa mivoaka ny fampiharana ianao dia ho voatahiry ho azy ny fanovana anao ary afaka manambatra mora foana ireo horonan-tsary ianao amin'ny alàlan'ny fizotran'ny solaitrabe.
Mampalahelo fa ny tsimbadika maimaim-poana amin'ny fampiharana dia misy marikivy manelingelina amin'ny horonan-tsary, misy doka marobe, ary fetran'ny fampisehoana sary maharitra dimy minitra. Mba hialana amin'ireo fahasosorana ireo dia tsy maintsy mividy ilay kinova pro ianao $ 2,99,3.
Azo ampiasain'ny mpampiasa roa izy io Android ho an'ny mpampiasa roa iPhone ary manolotra safidy an-taonina hanovana fampisehoana sary, sary, horonan-tsary ary maro hafa. Movavi Maimaimpoana izany ary manolotra traikefa matihanina ny fanovana horonantsary sy feo azy ary koa ny fahaizana mampiditra effets ambony kalitao sy hiasa amina endrika video maro samihafa. Azo atao ny manara-penitra ny feo, manoratra mivantana avy amin'ny efijery mba hisamborana antso an-tsary na hetsika hafa mitranga amin'ny fotoana tena izy ao amin'ny fitaovanao ary mamorona na mamerina sary mora foana ny sary.
Misy koa fiasa mahafinaritra hafa toy ny fahaizana mamorona dikanteny manokana. Movavi Izy io koa dia misy amin'ny kinova voaloa, ny safidiny Premium fivoahana $ 59,95. Hitan'ny mpampiasa sasany fa sarotra ampiasaina ny fitaovana raha tsy hoe mahay teknolojia izy ireo.
Azo ampiasaina izy roa Android izany iOS ary fampiharana tonga lafatra amin'ny famoronana fampisehoana ho an'ny newsfeed Instagram izy io satria mamolavola ny horonan-tsary ho efamira. Na izany aza, mandraka androany, manana safidy endrika sary azo atao izy Instagram and for IGTV. Ny kinova maimaim-poana amin'ity rindrambaiko ity dia mametra ny sary an-tsary toradroa ho 30 segondra ary ny sary mitsangana miorina amin'ny 11 segondra, izay tena mahasosotra.
Rehefa nozohina, MoShow ho sarotra ny mampiasa raha tsy mampiasa vola amin'ny pro dikan. Ny fampiharana MoShow morontsiraka feno $ 5,99 isam-bolana na $ 35,99 isan-taona.
Araka ny ahafahanao maminavina mora foana, misy fampiharana marobe natokana hanovana sary sy horonan-tsary ary sarotra matetika ny mahatakatra sy misafidy hoe iza amin'ireo no tena mety indrindra amin'ny filantsika ary milazalaza azy rehetra.
Efa nanandrana izahay; Izao sisa no hiditra amin'ny bizina!
VAKIO IHANY: Fampiharana hamoronana tantara avy amin'ny sary sy horonan-tsary (Android - iPhone)